စကားကြီး (၄) ခွန်းမပေါက်ကြားစေနဲ့.. - Celegroup
HomeKnowledgeစကားကြီး (၄) ခွန်းမပေါက်ကြားစေနဲ့..
အဖိုးအိုလင်မယားဟာပင်ပမ်းဆင်းရဲစွာနဲ့ ယာခင်းထဲမှာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် စားသောက် နေရတာအယောင်ဆောင်ဘုရင်ကြီးတွေ့ရပါ တယ် ။ဒီမှာတစ်ညအိပ် တည်းဖို့ခွင့်တောင်း တော့ အဖိုးအို လင်မယား ကခွင့်ပြု ပြီးလိုလေး မရှိအောင်လဲရှိတာလေးနဲ့ဧည့်ခံကျွေးမွေးကြ ပါတယ်။
လူဆင်းရဲပေမယ့်စေတနာမဆင်းရဲ တဲ့ အဖိုးအို လင်မယား ကို အယောင် ဆောင် ဘုရင်ကြီး စိတ်ထဲကြိတ်ပြီး ကျေ းဇူးတင်နေမိ တာပေါ့။ညကျတော့ အိပ်ယာ မဝင်ခင် အတူ ထိုင်စကားစမြီပြောကြတဲ့အခါ ဘုရင်ကြီး က..” အဖိုးတို့မှာစားမယ့်သောက်မယ့်လူလဲမရှိ ဘဲ ဘာလို့ ဒီလောက် ပင်ပမ်းကြီးစွာ အလုပ် တွေလုပ်နေရတာလဲ..ဒီ အရွယ် ဆိုတာသား ထောက်သမီးခံ အလုပ်လွှဲထားပြီးဘုရားသွား ကျေ ာင်းတက်လုပ်နေရမှာမဟုတ်လော “..ဟုပြောပါတယ်။
ဒီအခါအဖိုးအိုကဒီလိုပြန်ပြီး ပြောပါတယ်… “အမောင်ပြောတာဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့်သားသမီးဆိုတာလဲသူ့မီးနဲ့ သူ့အပူ ဖြစ်နေကြတာကလား.. ကျုပ်တို့မှာလဲကိုယ် စားဘို့တင်မကခိုးမှူးကြီးလဲ ပေးရသေးတယ် အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုလဲကျွေးရတယ်..သမုဒ္ဒ ရာထဲလဲပစ်ချ နေရသေးတယ်ရန်သူကိုလဲ ရှာ ဖွေကျွေးမွေးနေရပါတယ် ” အဖိုးအိုစကားကဘုရင်ကြီးအတွက်ထူးဆန်း နေပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကိုလဲသဘောမပေါက် တာကြောင့် အဖိုးအိုကိုပြန်မေးမိတော့တယ်။ “အဖိုးစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုတဆိတ်လောက် ရှင်းပြပါလားခင်ဗျာ..” ဒီအခါအဖိုးအိုကအဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းပြပါတယ် “ဒီလိုပါအမောင် ခိုးမှူ းကြီးကိုပေးရတယ်ဆို တာကတိုင်းပြည်ကို ဓားပြသူခိုးရန်သူမျိုးတွေ ရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ် တို့အား အခွန်ဘဏ္ဍာ ဆက်သပေးနေရတယ် လို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒါနဲ့နောက်ထပ်စကားတစ် ခွန်းကိုထပ်မေးပြန်ပါတယ်။ “အာဂန္တု ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေး ရတယ်ဆို တာကရော ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်ဗျာ ”“လောကမယ်မိဘကကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ တကယ်တော့ဧည့် သည်တွေပါပဲအမောင်..အချိန်တန်အရွယ် ရောက်တဲ့အခါသူတို့လမ်း သူတို့လျှောက်ကြ တာပဲ မဟုတ်လား ဒါကြောင့်သူတို့ကို အာ ဂန္တု့လို့ဆိုရတာပါမောင် ” ဒီစကားကိုလဲဘုရင်ကြီးသဘောကျ ပြန်ပါ တယ်။
နောက်ထပ်စကားအဓိ ပ္ပါယ် ကိုလဲထပ် မေးလိုက်ပြန်တယ်..“သမုဒ္ဒရာ ထဲလဲချ ရတယ်ဆိုတာကရောဘာ အဓိပ္ပါယ်ပါလဲအဖိုး ”“ဒါကဒီလိုပါ..ချောင်းမြစ်အသွယ် သွယ်တို့ ကလာတဲ့ရေမှန်သမျှ ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ထဲစီးဝင်ကြပေမ ဲ့ပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိသလိုဘဲတ နေ့တနေ့ကျုပ်တို့စားသမျှ အားလုံးဝမ်းခေါင်း ထဲမှာပြည့်တယ်လို့ မရှိတာအမောင်အသိပဲ မဟုတ်လား..
ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲ ပစ်ထဲ့ရ တယ်ဆိုတာရှာဖွေရသမျှ ကျုပ်တို့အသက်ရှင်သန် ဖို့ဒီဝမ်းခေါင်းထဲအစာစားပြီးဖြည့်ထဲ့နေရ တယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲ ”“ဒါဆိုနောက်ဆုံးစကား ရန်သူကိုရှာဖွေကျွေး မွေးနေရတယ်ဆိုကရော..”“ဒါက ပိုအရေးကြီးပါတယ် အမောင်..ကိုယ် ကချစ်ကြင်လို့ပေါင်းသင်း နေထိုင်နေတဲ့ဇနီးမ ယား ဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူပါဘဲ..”“အလို ဒီစကားကတော့ အဆန်းပါလား ရှင်းပြပေးပါဦးအဖိုးရဲ့ ”
“စိတ်တူကိုယ်တူဆိုပြီး ကိုယ်ကချစ်ခင်ပေါင်း သင်းနေပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသက်စည်းစိမ်ကို အ များဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်ချေရှိတာဒီဇနီးမယားပါပဲ အမောင်..ဒီစကားကတော့အရေးကြုံ လာတဲ့ အခါမှအမောင်သိပါလိမ့်မယ်.. အခုကတော့ ရန်သူကိုလဲရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေတယ်ပဲ မှတ် သားလိုက်ပါအမောင် ”နောက်ဆုံးစကားကိုဘဝင်မကျ ပေမယ့်မှတ် သားလောက်စရာ မို့လက်ခံလိုက်ပြီး သူဟာ ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တော့ အဖိုး အိုလင်မယားဟာ ပြူးပြူးပျာပျာ ဖြစ်သွားပါ တော့တယ်..။
“မကြောက်ကြပါနဲ့အဖိုး..တစ်ခုတော့ပြောပါ ရစေအခုအဖိုးပြောတဲ့ စကားကြီးလေးခွန်းကို တော့ဘယ်သူကိုမှမပြောမိစေဖို့မှာခဲ့ပါရစေ.. တကယ်လို့ပေါက်ကြားခဲ့ရင်သေဒဏ်သင့်မှာ ကိုသဘော ပေါက်စေချ င်တယ်..”“မပေါက်ကြားစေဖို့ ဂတိပေးပါတယ်မင်းကြီး”ဤသို့ဖြင့်ဘုရင်ကြီးလဲ နန်းတွင်းပြန်သွားပြီး နောက်တစ်နေ့ညီလာခံတွင် အဖိုးအိုပြောဆို ခဲ့သောစကားကြီးလေးခွန်းကိုမှူးးမတ်တွေကို ပြောဆိုမေးခွန်းထုတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကိုမေးမြန်း ပါတော့တယ် ။
အမတ်လူ လည်ဟာ အဖိုးအိုကို တံစိုးလက်ဆောင်ပေး ပြီးစကားလေးခွန်းကို မေးပေမယ့်အဖိုးအိုဟာ လုံးဝမပြောပါဘူး။နောက်ဆုံးအဖိုးအိုရဲ့ ဇနီးဖွားအိုကိုအသပြာ ငွေ ၁၀၀၀ ပေးပြီးမေးတဲ့အခါ ဖွားအိုကငွေကို ယူပြီးစကားလေးခွန်း အဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဟပြော ကြားလိုက်ပါတယ် ။ဒါနဲ့ရက် ချိန်းခုနစ်ရက်ပြည့်လို့ ညီလာခံပြန်ဝင် တဲ့အခါ ဘုရင်ကြီးကိုဘယ်သူမှ အဖြေမပေး နိုင်ကြပေမယ့် လူလည်အမတ်ကတော့ ခပ် ကြွားကြွားလေးဖြေနိုင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘုရင်ကြီးက သူ့အစွမ်းအစနဲ့ဖြေ နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသိနေတော့ မှန်မှန်မပြော သေဒဏ်ပေးမယ်. ဘယ် လိုသိလာတာလဲဆို တာမှန်မှန်ပြောဆိုပြီး အကြပ်ကိုင်မေးတော့မှ အဖိုးအိုလင်မယားဆီက သိလာတာလို့အမှန် အတိုင်းပြောပါတော့တယ်။
ဘုရင်ကြီးဟာအဖိုးအိုလင်မယားကိုအမျက် မာန်ရှပြီးရှေ့တော်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ရှေ့တော်ရောက်တဲ့ အခါ… “အဖိုး..ပေးခဲ့တဲ့ဂတိကိုဖျ က်ပြီး ဘာလို့တား မြစ်ချ က်ကိုလွန်ဆန်ရတာလဲ..သေဒဏ်ပေး ခံရမှာကိုမကြောက်ဖူးလား ”“မင်းကြီး..ကျွန်တော်မျိုးဟာ ဆင်းရဲနုံခြာပေမယ့် ဂတိတစ်လုံးကို အသက်ထက်ကာကွယ် ပါတယ်..ကျွန်တော်မျိုး၏ ဇနီးပြောကြားခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်.
အသပြာငွေ ၁၀၀၀ အတွက် ကျွန် တော်မျိုး၏ အသက်ကို ရောင်းစားသည့်ဇနီးသည်ဟာအနီးဆုံး ရန်သူဖြစ်ကြောင်းမင်း ကြီး ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီ ယုံကြည်ပါတယ်..”ဒီတော့မှဘုရင်ကြီးဟာ စိတ်ထဲဘဝင်မကျခဲ့ တဲ့နောက်ဆုံးစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်လက်ခံသွားပြီး သူဆင်းရဲအဖိုးအိုလင်မယား ကို ဆုလာဘ်များ ပေးသနား လိုက်ပါတော့ တယ် ။